I-China Steel Hexagon Nut, i-Nut Shear Nut, i-Nain Stainless Square Nut, i-Fainless Weld Nuts Fain.
Inkcazo:I-hexagon Nut yensimbi,I-Nut yensimbi,I-Shear Nut yensimbi,Inut Stainless yentsimbi,Amantla eNtsimbi angenazintsu,
Home > Imveliso > Amandongomane aChongiweyo > I-hexagon Nut yensimbi
Iintlobo zeMveliso ze- I-hexagon Nut yensimbi , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-hexagon Nut yensimbi , I-Nut yensimbi ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Umgangatho ophezulu weHellagon Flange Lock yeNut esemgangathweni
Ifektri yexabiso eliphantsi M3 i-Hexagon Nuts
Inkonzo ye-OEM Precision Amanqaku amathandathu eNtsimbi kunye neeBolts
OEM Wamkelekile i-M4 yeNtsimbi yokuTshixa amaNtsi
I-eBay eshushu yokuthengisa i-M5 yentsimbi etshixwayo
I-Amazon ekumgangatho ophezulu we-M6 yensimbi yokutshixa itshiya
I-CNC ehambelana ne-Machining High Precision yensimbi yeHexagon Nut
I-M2 * 5.5 I-Hexagon Nut yeNet
I-Amazon Hot yokuThengisa Insert yokuKhiya amaNtsi
I-Lock Conduit Yensimbi Nut M3 Nuts
I-M3 Hexagon I-Nut yeSilivere yeNut
Umgangatho ophezulu weHellagon Flange Lock yeNut esemgangathweni Iipleyiti zentsimbi yePlain zilungele apho amandla kunye nexabiso ziimpawu eziphambili. Isinyithi yomelele kwaye iqinile kodwa ayizukuxiniswa yinyani encinci kunesinyithi. Ukuphucula...
Ifektri yexabiso eliphantsi M3 i-Hexagon Nuts Iipleyiti zentsimbi yePlain zilungele apho amandla kunye nexabiso ziimpawu eziphambili. Isinyithi yomelele kwaye iqinile kodwa ayizukuxiniswa yinyani encinci kunesinyithi. Ukuphucula ukuchasana kwayo...
Inkonzo ye-OEM Precision Amanqaku amathandathu eNtsimbi kunye neeBolts I-Hex Nuts ilungele ukusetyenziswa kwiindibano ezinamandla asezantsi Iipleyiti zentsimbi yePlain zilungele apho amandla kunye nexabiso ziimpawu eziphambili Inkqubo ye-drive...
OEM Wamkelekile i-M4 yeNtsimbi yokuTshixa amaNtsi Intshayelelo yeMveliso Ibonisa iiNuts ze-Lock zeNtsimbi zeM4 kwaye ikwabonelela ngenkonzo ye-OEM. Kubomi bemihla ngemihla, abantu bahlala beyisebenzisa kwimizi-mveliso okanye ngamanye amaxesha...
I-eBay eshushu yokuthengisa i-M5 yentsimbi etshixwayo Intshayelelo yeMveliso Iintlobo ngeentlobo zezi zimalunga nama-M5 eNtsimbi yeZitshixo zeNtsimbi. Sisixhobo esisebenzayo esihlala sisetyenziswa kushishino. I-eBay eshushu yokuthengisa i-M5...
I-Amazon ekumgangatho ophezulu we-M6 yensimbi yokutshixa itshiya Intshayelelo yeMveliso Imveliso lolunye uhlobo lwe-M6 yensimbi etshixwayo. Uhlobo lwe-M6 Insert Insert Lock-Nut luyasebenza. I-Amazon esemgangathweni ye-M6 yentsimbi yokutshixa itshixa...
I-CNC ehambelana ne-Machining High Precision yensimbi yeHexagon Nut I-Hex Nuts ilungele ukusetyenziswa kwiindibano ezinamandla asezantsi Iipleyiti zentsimbi yePlain zilungele apho amandla kunye nexabiso ziimpawu eziphambili Inkqubo ye-drive yintloko...
I-CNC ehambelana ne-Machining Precision egqibeleleyo M2 * 5.5 I-hexagon Nut I-iron Hexagon Nut ekwabizwa ngokuba yintsimbi yeNut, i-iron shear nati ifanelekile ukusetyenziswa kwiingqungquthela zamandla aphantsi. Izixhobo zokuqinisa ityhefu yensimbi...
I-Amazon Hot yokuThengisa Insert yokuKhiya amaNtsi Intshayelelo yeMveliso Olu hlobo lweNtsimbi yokuFakela amaNqaku okushushu lishushu eAmazon. I-Amazon Hot yokuThengisa Insert yokuKhiya amaNtsi Uluhlu lwezixhobo zentsimbi ezisetyenziswa...
I-Lock Conduit Yensimbi Nut M3 Nuts Intshayelelo yeMveliso Yinto ye-M3 yentsimbi yokutshixa iNut kwaye sinokunikezela ngenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM. I-Lock Conduit yensimbi Nut M3 Nuts luhlobo lwesantya sentsimbi esetyenziswa kakhulu kubomi bemihla...
I-M3 Hexagon I-Nuts zesilivere Nut yinxalenye edityaniswe ndawonye ngebholithi okanye isikhafu, kwaye iyinxalenye ekufuneka isetyenzisiwe kubo bonke oomatshini bokuvelisa. Ngokwezinto ezahlukileyo, yahlulwe yintsimbi yekhabhoni, isinyithi,...
KwiChina I-hexagon Nut yensimbi Abaxhasi
Amantongomane esinyithi anemisonto yangaphakathi yomatshini edityaniswe ngomatshini kunye neebhanti. Amantongomane esinyithi anamandla kwaye iinuts zeFlange zokutshixa, amantshontsho e-Flange evalekileyo yokutshixa, amantongomane okuzitshixa, amantshontsho e-hex njl. Ubungakanani obahlukeneyo kunye nemibala inokushintshwa. Ubukhulu obuthandwayo ziisayizi zeM3, M4 kunye neM5. Ukuba ufuna obunye ubungakanani, singakusivelisela bona. Ukuba ufuna inkonzo yokupakisha okhethekileyo kubandakanya iibhokisi ezikhethekileyo zephakheji, kukulungele nathi. Nawuphi na umbuzo okanye imfuno, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
I-hexagon Nut yensimbi I-Nut yensimbi I-Shear Nut yensimbi Inut Stainless yentsimbi Amantla eNtsimbi angenazintsu I-hex yemaNtsimbi Tshixa iNut yeRim
I-hexagon Nut yensimbi I-Nut yensimbi I-Shear Nut yensimbi Inut Stainless yentsimbi Amantla eNtsimbi angenazintsu